Booqo USA: Sax shuruudaha gelitaanka cusub ee Maraykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Booqo USA: Sax shuruudaha gelitaanka cusub ee Maraykanka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Booqo USA: Sax shuruudaha gelitaanka cusub ee Maraykanka.
Muwaadiniinta Maraykanka iyo kuwa ajaanibka ah ee si buuxda u talaalan waa in ay la socdaan caddaynta heerka tallaalkooda si ay u siiyaan diyaaradahooda ka hor inta aanay u dhoofin Maraykanka.
Maamulka Biden wuxuu ku dhawaaqay siyaasad cusub oo socdaalka hawada caalamiga ah oo adag, joogta ah aduunka oo dhan, oo ay hagayso caafimaadka dadwaynaha.
Laga bilaabo Noofambar 8, dadka ajnabiga ah ee hawada u safraya ee Maraykanka waxaa looga baahan doonaa in si buuxda loo tallaalo iyo inay bixiyaan caddaynta heerka tallaalka ka hor intaysan raacin diyaarad si ay ugu duulaan Mareykanka,
Dadka safarka ah ee si buuxda u talaalan ayaa sii wadi doona in looga baahan yahay inay muujiyaan dukumeenti ku saabsan tegitaanka fayraska taban ee ka hor muunad laga qaaday muunad saddex maalmood gudahooda ah oo loo socdaalay Maraykanka ka hor intaanay fuulin.
Laga bilaabo Noofambar 8 ee United States waxa uu bedelayaa shuruudaha wakhtiga firaaqada iyo ganacsiga ee socdaalayaasha si ay u soo galaan Maraykanka.
Maraykanka The Waaxda Dawlada ayaa maanta soo saaray Tallaal cusub oo COVID-19 ah iyo Tijaabada Tilmaamaha Safarrada Caalamiga ah.
Laga bilaabo Noofambar 8, safarro diyaaradeed oo ajnabi ah oo taga United States waxaa looga baahan doonaa in si buuxda loo tallaalo iyo in la bixiyo caddaynta heerka tallaalka ka hor inta aan la fuulin diyaarad si loogu duulo Maraykanka, iyada oo kaliya laga reebo xaddidan.
The CDC ayaa go'aamiyay in ujeedooyinka gelitaanka United StatesTallaalada la aqbalayo waxaa ku jiri doona kuwa FDA ogolaatay ama la oggolaaday, iyo sidoo kale tallaalada leh liiska isticmaalka degdegga ah (EUL) ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO). Faahfaahin dheeraad ah ka eeg cdc.gov
Dadka safarka ah ee si buuxda u talaalan ayaa sii wadi doona in looga baahan yahay inay muujiyaan dukumeenti ku saabsan tegitaanka fayraska taban ee ka hor muunad laga qaaday muunad saddex maalmood gudahooda ah oo loo socdaalay Maraykanka ka hor intaanay fuulin. Taas waxaa ku jira dhammaan dadka safarka ah - muwaadiniinta Mareykanka, deganaanshaha rasmiga ah ee sharciga ah (LPRs), iyo muwaadiniinta ajnabiga ah.
Si loo sii xoojiyo ilaalinta, socotada aan la tallaalin - ha ahaadeen muwaadiniinta Mareykanka, LPR-yada, ama tirada yar ee aan la tallaalin ee ajnabiga ah - waxay hadda u baahan doonaan inay muujiyaan dukumeentiga tijaabada fayraska taban ee muunad laga qaaday hal maalin gudaheed safarka Mareykanka.
Caddaynta tallaalku waa inay noqotaa warqad ama diiwaan dhijitaal ah oo ay soo saartay ilo rasmi ah waana inay ku jirtaa magaca socotada iyo taariikhda dhalashada, iyo sidoo kale badeecada tallaalka iyo taariikhda(yada) maamulka ee dhammaan qiyaasaha uu qaatay musaafurka.
Muwaadiniinta ajnabiga ah, caddaynta tallaalka ayaa loo baahan doonaa - marka laga reebo aad u xaddidan - ka hor intaysan u dhoofin Mareykanka.
Iyadoo caddaynta tallaalka aan looga baahnayn muwaadiniinta Mareykanka iyo LPR-yada, muwaadiniinta Mareykanka ee si buuxda u tallaalay iyo LPR-yada (iyo kuwa ku tiirsan) waxay sii wadi doonaan inay muujiyaan dukumeentiga tijaabada fayraska taban ee muunad la qaaday ilaa saddex maalmood ka hor inta aan loo dhoofin Mareykanka . Waa inay keenaan caddaynta tallaalka si ay ugu qalmaan daaqadda 3-da maalmood ee imtixaanka. Muwaadiniinta Maraykanka iyo LPR-yada aan awoodin inay muujiyaan inay si buuxda u talaalan yihiin waa inay soo bandhigaan dukumentiga tijaabada fayraska taban ee la qaaday wax ka badan hal maalin ka hor intaanay dhoofin.
Marka lagu daro xaqiijinta caddaynta natiijada tijaabada diidmada ka hor - oo ay sameeyeen ilaa Janaayo 2021 - shirkadaha diyaaraduhu waxay sidoo kale xaqiijin doonaan heerka tallaalka.
Rakaabku waxay u baahan doonaan inay muujiyaan heerka tallaalkooda, ha ahaato diiwaanka warqadda, sawirka warqadooda, ama abka dhijitaalka ah.
Shirkadaha diyaaraduhu waxay u baahan doonaan:
Iswaafaji magaca iyo taariikhda dhalashada si aad u xaqiijiso in rakaabku yahay isla qofka ka muuqda caddaynta tallaalka;
Go'aanso in diiwaanka laga soo xigtay ilo rasmi ah (tusaale, wakaaladda caafimaadka dadweynaha, hay'adda dawladda) ee dalka tallaalka laga siiyey;
Dib u eeg xogta muhiimka ah ee go'aaminta haddii rakaabku buuxiyo qeexida CDC ee si buuxda loo tallaalay sida badeecada tallaalka, tirada qiyaasaha tallaalka ee la helay, taariikhda(yaasha) maamulka, goobta (tusaale, rugta tallaalka, xarunta daryeelka caafimaadka) ee tallaalka.
Carruurta da'doodu ka yar tahay 18 jir waa laga dhaafay shuruudaha tallaalka ee socotada ajnabiga ah, marka la eego labadaba u-qalmitaanka carruurta yaryar qaarkood ee tallaalka, iyo sidoo kale kala duwanaanshaha caalamiga ah ee helitaanka tallaalka carruurta waaweyn ee u qalma in la tallaalo.
Socdaalayaashu waa inay muujiyaan dukumeenti ah natiijada baaritaanka COVID-19 fayraska taban ama dukumentiga ka soo kabashada COVID-19 90kii maalmood ee la soo dhaafay ka hor intaysan raacin diyaarada Mareykanka safarka Maraykanka).
Labada imtixaan ee kordhinta aashitada nucleic (NAATs), sida baaritaanka PCR, iyo tijaabooyinka antigen-ka ayaa u qalma.
Is tijaabin ayaa la isticmaali karaa haddii ay buuxiso shuruudaha dalabka oo ay ku jiraan soo saarista waqtiga-dhabta ah ee adeegga caafimaadka ee xiriirka la leh soo saaraha tijaabada oo soo saara natiijo tijaabo ah oo ay dib u eegi karto shirkadu ka hor inta aan la fuulin.
Kani waa isla heerka imtixaanada u qalmida ee lagu dabaqay shuruudihii imtixaankii bixitaan kahor ilaa Janaayo.
Imtixaanka waa in la qaadaa wax aan ka badnayn saddex maalmood ka hor taariikhda duulimaadka caalamiga ah ee Maraykanka.
Markaa, haddii musaafurku u dhoofayo Maraykanka 10ka galabnimo ee Janaayo 19, waa inay soo bandhigaan natiijada tijaabada taban ee tijaabada la qaaday wakhti kasta ka dib 12:01 subaxnimo ee Janaayo 16.
Markii hore, dhammaan dadka safarka ah ayaa looga baahnaa inay muujiyaan natiijada baaritaanka taban saddex maalmood gudahooda marka ay u safraan Mareykanka.
Muwaadiniinta Maraykanka iyo LPR-yada ee tusi kara inay si buuxda u talaalan yihiin, shuruudaasi sideedii ayay ahaanaysaa - waa inay tusaan dukumeenti natiijada baadhista taban ee muunad laga qaaday saddex maalmood gudahooda.
Taas macneheedu waxa weeye in dhammaan muwaadiniinta Maraykanka ee si buuxda u tallaalay iyo LPR-yada u socdaalaya Maraykanka waa in ay u diyaar garoobaan soo bandhigida dukumeenti ku saabsan xaaladdooda tallaalka oo ay weheliso natiijada baadhista taban.
Muwaadiniinta Maraykanka iyo LPR-yada aan soo bandhigi karin caddaynta tallaalka buuxa hadda waa inay soo bandhigaan dukumeentiyada tijaabada diidmada ah ee muunad laga qaaday hal maalin gudaheed markay baxeen.
Sida ugu fudud ee looga hortagi karo in la buuxiyo shuruudahan adag waa in socotada la tallaalo.
Waxaan rumeysannahay in badi dadka safarka ah ee caalamiga ah ay si buuxda si buuxda u tallaali doonaan kuwa aan horayna u haysan ee u qalma inay is tallaalaan ka hor intaysan safrin.
Tijaabooyin aan farmashiyaha laga qorin ayaa si weyn looga heli karaa gudaha Mareykanka, sidaa darteed muwaadiniinta Mareykanka ee u safraya dibadda waxay la imaan karaan xirmo tijaabo ah oo la soo saaray marka ay ka dhoofayaan Mareykanka oo ay qaadan karaan ka hor intaysan ku laaban dalkoodii. Waxaanan ku kalsoonnahay in sidoo kale la heli doono sahay ku filan caalamka oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo jira habsocod ka-dhaafitaan ah oo laga sameeyay shuruudihii imtixaankii dhoofka ka hor markii imtixaan ku habooni aanu jirin.